Bokin'i Mikà - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Mika)
Ny Mpaminany Mikà, nataon'i James Tissot, tanelanelan'ny taona 1896 sy 1902.
Tany amin'ny tanàna ambanivohitra atao hoe Moreseta ao atsimon'ny Fanjakan’i Jodà no nonenan'i Mikà (na Mika na Mikea). Tamin’ny andron’ny mpanjaka Jotama sy Ahaza (na Akaza) ary Hezekia (na Ezekiasa) no fotoana niainany, izany hoe taloha sy taorian’ny nahazoan’i Asiria an’i Samaria renivohitry ny Fanjakan’i Israely. Niaina tamin’ny fotoana mitovitovy amin’ny an’i Hosea (na Osea) sy i Isaia (na Izaia) izy. Tsy tiany ny fombam-pianinana an-drenivohitra izay ahitana izao karazam-pahotana maro rehetra izao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27i_Mikà&oldid=975871"
Voaova farany tamin'ny 20 Oktobra 2019 amin'ny 17:37 ity pejy ity.